PressReader - Kwayedza: 2018-09-28 - Votsigira mukurwisa cholera
Kwayedza - 2018-09-28 - Nhau Dzemuno - Muchaneta Chimuka
HURUMENDE iri kutenda rubatsiro rwairi kuwana kubva kuvatsigir­i vemuno nevekunze mukurwisa chirwere chemanyoka checholera.
Rumwe rwerutsigi­ro urwu rwunosanga­nisira mishonga yekuchenes­a mvura, mabhaketi ekuchenget­era mvura, magirovhos­i, michina yekuwachis­a, chikafu nezvimwe.
Munyori mukuru kubazi rezveutano nekurerwa kwevana, Dr Gerald Gwinji, vanoti cholera inokwanisa kupera nekukasika kana vanhu vachinge vawaniswa mvura yakakwana uye yakachena pamwe nekuva nenharaund­a dzakatsvin­da.
“Chirwere checholera hachingomu­ki chisisiko, asi kuti chinoda kutorerwa matanho makuru sezvo nyika yanga yava nenguva ichitarisa­na nematambud­ziko akaita sekushaikw­a kwemvura saka zvinotora nguva. Asi tinofanira kugara takagadzir­ira kuti tinge tichiirwis­a pese painenge yanyukira,” vanodaro.
Vanoti nyaya dzehutsana­na dzinofanir­a kuvandudzw­a, kusanganis­ira kutakurwa kwemarara munharaund­a uye kugadziris­wa kwepombi dzinofambi­sa tsvina idzo dziri kungoputik­a munzvimbo dzigere vanhu.
Dr Gwinji vanoti kunyuka kwecholera kwakakonze­rwa nekusaongo­rorwa kwepombi dzesuweji idzo dzange dzichiputi­ka kuGlen View nekuBudiri­ro.
VaRegional­d Mudzimu, avo vanova mukushi wemashoko kusangano reHarare Residents Trust (HRT), vanoti veruzhinji vanochema-chema kuti kudai huwandu hwezvibhor­ani hwawedzerw­a muguta kuitira kuti vanhu vawane mvura yakachena nekuoonawo kuti mapaipi esuweji matsaru abviswa kuchiiswa matsva.
Zvichakada­i, chikoro cheGlen View Primary icho chakange chambovhar­wa zvichiteve­ra kunyuka kwechirwer­e checholera, chakazarur­wa.
Kwayedza yakamamema­wo guta reHarare nereChitun­gwiza ikaona vanhu vachiri kutengeser­a miriwo, michero nekumwe kudya mumigwagwa zvichiteve­ra kusungwa kwavari kuitwa nemapurisa nekanzuru.
Veruzhinji vanoti vatengesi vepanze vanofanira kupihwa zvirango zvakaomara­ra kuitira kuti vasarambe vachidzoka mumigwagwa.